बुटवलमा रहेको युवती बेच्ने होटलका संचालक नियन्त्रणमा ! - Sabal Post
बुटवलमा रहेको युवती बेच्ने होटलका संचालक नियन्त्रणमा !
८ जेष्ठ २०७६, बुधबार ० बिचार / प्रतिक्रिया
बुटवल – लागु औषधमा मात्र ध्यान केन्द्रीत गरेर अनुसन्धानमा लागेको प्रहरी, रुपन्देहीमा युवतीहरुको पसल राखेर होटल होटलमा सप्लाई गरिने घटना फेला परेपछि झस्केको छ । बुटवलमा रहेको एक सानो होटलबाट ठुला ठुला होटलहरुमा समेत युवती सप्लाई हुने गरेको तथ्य प्रहरीले हात पारेको छ ।
बुटवल कालिकानगर स्थित राप्ती मेनु होटलबाट जव एक जना १५ बर्षिया नाबालिक हरेक दिनको यौन शोषणको पिडा सहन नसकेर भागिन त्यसपछि बुटवलमा फस्टाएको यौन धन्दाको पर्दाफास भएको हो । गरिबीका कारण होटलमा भांडा माझ्न बसेकी किशोरीलाई होटलसंगै अन्य होटलमा समेत यौन सम्पर्कका लागि पठाउन थालिएपछि किशोरी भागेर घर गएकि थिईन् । घरमा आमासंग आफुले भोगेको पिडा सुनाउंदा समेत परिवार प्रहरीकोमा नगएर किशोरीलाई काम गर्न भारत पठाउने क्रममा नेपाल भारत सिमाबाट उद्धार गरेर प्रहरीमा बुझाईएपछिमात्र किशोरीको पिडा र बुटवलमा चलेको धन्दा सार्वजानीक भएको हो ।
प्रहरीका अनुसार राप्ती मेनु होटलमा किशोरी र युवतीहरु जम्मा गर्ने र बुटवलमा बिभिन्न होटलहरुमा यौनधन्दाका लागि पठाउने गरिएको थियो । किशोरीको बयानमा पनि हाफुलाई गाडीमा राखेर अग्ला घर भएको एसी चल्ने होटलमा पठाईएको ब्यहोरा आएको प्रहरीले जनाएको छ । किशोरीको बयानका आधारमा प्रहरीले होटल संचालक दम्पत्ती टेकबहादुर कुंवर र मिना कुमारी कुंवरलाई नियन्त्रणमा लिएको छ । प्रहरी यौनधन्दा नियन्त्रण गर्न र समाजमा बिकृतिलाई न्युनिकरण गर्न सक्रियतापुर्वक लागेको रुपन्देही प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरिक्षक हृदय थापा बताउंछन् ।
प्रहरीको सक्रीयतालेमात्र यौन धन्दा नियन्त्रण नहुने बताउंदै एसपि थापाले समाजमा रहेको नागरिकहरुको सहकार्य र सक्रियतामा प्रहरीले यस्ता धन्दामा नियन्त्रण गर्न सक्ने बताउंछन् । कुंवर दम्पत्तीले युवतीहरुलाई एक पटक सम्पर्क गरेको १ हजार ५ सय र रातभरी बसेको ६ हजार सम्म लिने गरेको एसपी थापाले बताए । उद्धार गरिएकी किशोरीलाई भने एक पटक ३हजार ५ सय र एक पटक एक हजार ५ सय मात्र दिएको किशोरीले बताईन् । प्रहरी उपरिक्षक थापाले किशोरीको बयानका आधारमा यौनधन्दाको बिषयमा गम्भीर अनुसन्धान गरिने बताएका छन् ।
तस्बिर : दिनेश कुमार श्रेष्ठ
आज देशभर चिकित्सक संघले स्वास्थ्य सेवा वन्द…
रवि लामिछानेको मुद्दामा आज सुनुवाइ हुँदै
यसकारण आउँछ महिलाहरुमा ४० कटेपछि फेरि बैंस
करेण्ट लागेर एकको मृत्यू
गण्डकी प्रदेशमा एक वर्षमा तीन लाख विदेशी…
बेरोजगार युवालाई शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण…
आज मंसिर २९ गते आइतबारको राशिफल
मर्चवारीमा समाजवादीको गाउंपालिका समिति गठन
पश्चिम सरावल १ मा दोस्रो वडाध्यक्ष कप पुरुष फुटबल प्रतियोगिता…
श्रीमद् भागवत पितृमोक्ष धनधन्याञ्चल सप्ताह ज्ञान महायज्ञ तेस्रो दिन पनि…
साना किसान कृषि सहकारी सस्थां लिमिटेडको १७औ साधारण सभा सम्पन्न
बर्दघाटमा एक दिने निशुल्क स्वास्थ्य शिविर सम्पन्न
आदिकवि भानुभक्त आचार्यको स्मृतिमा बन्यो – ‘रामायण भवन’
धनुषा बम विस्फोटमा परी मृत्यु भएका इन्स्पेक्टर दाहालको आर्यघाटमा अन्त्येष्टि
सहकारीको ३० प्रतिशत लगानी कृषिमा अनिवार्य गरिंदै
विवाह भोजको खर्च धुर्मुस सुन्तली फाउन्डेसनलाई सहयोग गर्ने नव दम्पती